Tattoo buuraha: macnaha iyo ururinta naqshadaha | Tattoo
Ferdinand Prada | | Tattoos leh qaabab
Hadday ka mid yihiin kuwa jecel dabeecadda ama kuwa jecel inay safraan oo ay ogaadaan geesaha cusub ee meerahan, the sawirada buurta Iyagu waa naqshad ay caannimadooda si aad ah kor ugu kacday muddooyinkii u dambeeyay. Tattoo noocan oo kale ah ayaa sii fududaaneysa in la arko, gaar ahaan kooxda dadka kor ku xusan. Degganaanta, ka adkaanta ama jacaylka dabeecadda, waa qaar ka mid ah fikradaha doonaya inay naftooda ku matalaan astaamahaas.
Qodobkaan oo loogu tala galay gaar ahaan sawirada buurta waxaad eegi kartaa kala duwan noocyada naqshadaha, inkasta oo arrimuhu ay iska cad yihiin. Maanta waa moodada in la sawiro muuqaalka sawiraya buurta muuqaalka. Tattoo-dhexaad dhexdhexaad ah, gaar ahaan hooska cawl. Waxaas oo dhan waxay la socdaan dulmar wanaagsan oo gudbiya jilicsanaanta iyo jilicsanaanta. Natiijadu way iska cadahay isha.
1 Micnaha taatuuga buurta
2 Sawirrada Tattoos Mountain
Micnaha taatuuga buurta
Aan si qoto dheer u galno macnaha tattoosyadaan. Waligaa buur ma fuushay? Markaan gaarno meesha ugu sareysa dhammaanteen waxaan sameynaa isku mid, gacmaha akimbo miskahayaga, waxaan qaadnaa neef xoog leh oo neefsata waxaan dhahnaa: "Fiiri waxaad xiran tahay", markaas ayaan dib u jaleecnaa si aan u aragno waxaan ka adkaanay weli waxaan dareemayaa awood badan, waxaan dareemeynaa buuxnaan, titanic, sida haddii aan wax naga celin karin. Waxaan dareemeynaa uun aan la burburin karin oo aan la joojin karin.
Micnaha ugu baahsan waa jacaylka dabeecadda. Qofka ku shaabadeeya dhul buuraley ah badiyaa waa dabeecadda jecel. Qofka jecel quudhin, aan la garanayn oo aan waxba ka baqayn. Buurtu waxay astaan ​​u tahay ixtiraamka waxa naga caawiya inaan is dejinno oo aan maankeenna nadiifinno marka naloo gacan dhaafo.
Dhab ahaantii, dhaqammo iyo halyeeyo badan oo ka mid ah waddamada uu muuqaalku ka jiro u badan buuraley, waxaa loo tixgeliyaa imtixaan qaangaar ah si loo gaaro meesha ugu sarreysa ama buurta dusheeda oo la keeno caddeyn si loo xaqiijiyo talaabada carruurnimada ilaa nolosha dadka waaweyn.
Taasi waa waxa tattoo buurta loola jeedo inuu astaan ​​u noqdo. Qofka lagu xardho muuqaalka dhulka buur, dhab ahaantii, xaqiiqo ama dhacdo ayaa lagu xardhay oo ay ahayd inuu ka gudbo isagoo ku salaysan dadaal, allabari iyo ilmoXusuusin weligeed ah dadaal in aad maalgashatay in aad gaarto hadafyadaada oo aadan iloobin bilowgaaga.
Macno kale oo sida caadiga ah la siiyo noocaan oo kale ah ayaa ah xasiloonida. Qofka leh buur tattooed caadi ahaan waa qof xasilloon oo leh xukun adag oo sida buur oo kale ah, ma guuri karaan in kasta oo duruufaha ku xeeran ay jiraan.
Macno yar oo baahsan ayaa ah la nabad. Markaan fuulno buurta dusheeda, waxaan ka helnaa aamusnaan iyo “nabad” qaylada adduun ee ku hareereysan magaalooyinka waaweyn iyo walbahaarka aan maalin walba haysanno sababtuna waa qaab nololeedkeenna hadda. The socodka, socodka, ama waxqabad kasta oo la xiriira buuraha fuulitaanka ayaa noqday mid aad moodo sanadihii la soo dhaafay taas oo ay ugu wacan tahay kuwa aan soo sheegnay.
Aynu nidhaahno qaddarintii magaalooyinka iyo magaalooyinka ku xeeran xarumaha waaweyn ee magaalooyinka, waxay sababtay jacaylka dabeecadda iyo waxqabadyada la xiriira inay si aad ah u koraan. Sidaa darteed, waa wax iska caadi ah in dunta tattoo -ga ay nuugtay mowjaddan iyo tattoos -ka qaabkan ayaa koray, dhammaan bulshooyinka adduunka.
In kasta oo buuraha ay yihiin cunsur si fudud loogu dari karo qaybta Tattoo muuqaalka (taas oo aan horeyba ugu hibeynay maqaalka qariibka ah), cunsurkan dabeecadda ayaa leh qarash badan oo astaan ​​ah oo laga yaabo inuu si fiican u yeesho qayb u gaar ah. Oo waa sidaas, ka macnaha tattoos buurta waa mid aad u xiiso badan. Xaqiiqdii waa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee dadka u horseedda inay yeeshaan tattoo-kan.
Tattoo halkaas oo buuraha, kaymaha ama webiyadu ka muuqdaan, waxay astaan ​​u yihiin jacaylka dabeecadda. Waxa kale oo lala xidhiidhiyaa nabad iyo deggenaansho. Gaar ahaan waxa la dareemayo markaan dul joogno buur dheer. Macnaha kale ee ay tahay inaan xisaabta ku darsanno waa nabad, horumar, xoog iyo adkaysi. Astaamaha lagu garto in qof kastaa rabo inuu ku milicsado tattoo -kan.
Tattoo noocan ah ayaa siyaabo badan iyo meelo badan oo jirka ah si weyn ugu muuqda laakiin sida had iyo jeer, waxay dhammaan ku xiran tahay naqshadda aan rabno. Haddii aan doorano naqshad leh faahfaahin badan, tattoo waa in lagu sameeyaa a aag aad u ballaaran sida quadriceps ama dhinaca. Haddii dhinaca kale, aan doorano a naqshadeynta waxoogaa ka badan ugu yar waxaan ku qaban karnaa hal aagga jirka wax ka yar sida curcurka, gacanta ama xitaa gacmaha.
Marka la soo koobo, buuruhu waxay leeyihiin culays culus dhaqanka adduunka iyo bulshooyinka Iyo koonka tattoos -ka ayaa ku celceliyay culeyskan waxayna ka caawisay dad badan inay xirtaan astaantan juqraafiyeed ee lagu calaamadeeyay maqaarkooda taasoo calaamad u ah waxa ay sameyn karaan nolosha.
Galbeedka soo socda waxaan kuugu reebnay xoogaa sawirro ah si aad u hesho fikradaha naqshadaha noocan ah tattoo oo aad adigu adigu iskaa u habayn kartid.
Sawirrada Tattoos Mountain
Tattoo silhouette qurux badan leh buuro leh.
Tattoo badda iyo buurta xaga dambe (Fuente).
Tattoo badda iyo buuraha leh qaabka rhombus (Fuente).
Tattoo dabiiciga ah oo leh buuro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos leh qaabab » Tattoo buuraha, waa maxay macnahoodu?